Wallet, Cimilo iyo Khariidado: warar dheeraad ah oo ku saabsan IOS 15 ee WWDC 2021 | Wararka IPhone
Wallet, Cimilo iyo Khariidado: warar dheeraad ah oo ku saabsan iOS 15 WWDC 2021
Angel Gonzalez | | macruufka 15, WWDC 2021
IOS 15 sidoo kale waxay dhexgashaa wararka saddex barnaamij oo asal ah: Khariidado, Cimilo iyo Wallet. Labadaba waxaa ka mid ah isdhexgalka naqshadeynta cusub ee Apple ay ku dartay cusbooneysiintan cusub. Laakiin marka lagu daro, waxay rabeen inay diiradda saaraan seddex barnaamij oo caadi ah war weyn sida khariidado cusub oo dib loo habeeyay, macluumaad dheeri ah oo ku saabsan barnaamijka Cimilada iyo suurtagalnimada inaad ku qaadato liisanka wadista ee barnaamijka Wallet.
Astaamaha cusub ee barnaamijyada asalka ah ee macruufka, hadda macruufka 15
Barnaamijka Salada ayaa helay xirmo muhiim ah oo war ah. Si kastaba ha noqotee, in badan oo iyaga ka mid ah kuma arki doonno Spain, xilligan. Mid ka mid ah waa is dhexgalka Shatiga wadista oo ah habka aqoonsiga ee Mareykanka. Xaqiiqdii, waxay soo sheegeen in FSA-da ay darsayaan sida loogu waafajin karo aqoonsiga dhabta ah ee garoomada diyaaradaha. Sidoo kale waa lagu daray howlaha furitaanka albaabka mahadsanid furayaasha dalwaddii si loo furo albaabada hudheelka iyo wixii lamid ah.
Barnaamijka Waqti ku hel macluumaad badan oo dheeri ah sawirada cusub, macluumaadka la xiriira dabaysha, shucaaca UV, cadaadiska Hawada, iwm. Lacag cusub ayaa sidoo kale lagu daray oo la jaanqaadaysa cimilada mid kasta oo ka mid ah goobaha.
Ugu dambeyntii, Khariidadaha Apple wuxuu soo bandhigi doonaa khariidadaha dib loo naqshadeeyay ee iOS 14 ee Spain iyo Boortaqiiska ee iOS 15 iyo dhamaadka sanadka Australia iyo Talyaaniga ayaa sidoo kale sameyn doona. On macruufka 15 Hab cusub oo habeen ah ayaa lagu soo daray si loo arko khariidadaha cusub oo muuqaal ah. Macluumaadka la xiriira isgoysyada adag, isgoysyada, nalalka taraafikada, iwm ayaa sidoo kale lagu soo daray. Macluumaad dheeri ah, basaska iyo tareenada lagu daro gaadiidka dadweynaha waxaa lagu dhex daray khariidadaha Apple waxayna nooga digayaan goorta aan ka degayno gaadiidka. Sida iska cad, shaqooyinkan waxaa laga heli karaa oo kaliya magaalooyinka qaar sida Los Angeles, New York ama Philadelphia.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » macruufka » macruufka 15 » Wallet, Cimilo iyo Khariidado: warar dheeraad ah oo ku saabsan iOS 15 WWDC 2021
IOS 15 waxay u keentaa horumar wax ku ool ah AirPods Pro
Waad ku qori kartaa qoraalka iyo macluumaadka LiveText ee iOS 15